भरतपुर अस्पतालमा पाँच सुत्केरीको मृत्यु: सरकारी प्रतिवेदन भन्छ, ‘उनीहरूलाई बचाउन सकिन्थ्यो’ – Halkaro
चितवन । २०७४ असोज, कात्तिक र मंसीरमा भरतपुर अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आएका पाँच महिलाको ज्यान गयो । उनीहरू २१ देखि २८ वर्षसम्मका थिए । यो मृत्युबारे अस्पतालले औपचारिक रूपमा केही भनेको छैन । बरु सकेसम्म तथ्यहरू लुकाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनीले उल्टै हप्कीदप्कीको भाषा प्रयोग गरे । उनले भने, “जसरी मरे पनि तपाईंहरूलाई बताउन आवश्यक छैन । तपाईंहरूलाई बताउनुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ?”
गल्ती लुकाउने प्रयास
“म भन्दिनँ”: डा. रुद्र मरासिनी, मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट
यसअघि अस्पतालले केशिया, सुनु, विना र शोभाको परिवारलाई उनीहरूको मुटु र मिर्गाैलाले काम नगर्दा मृत्यु भएको मौखिक जवाफ दिएको थियो, जसलाई चिकित्सकहरूले ‘कहीं लगे पनि निको पार्न नसकिने रोग’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । यस्तै सुरुचीको परिवारलाई उनीहरूले अत्यधिक रक्तश्रावपछि रगत जम्ने तत्वको अभावमा रक्तश्राव नरोकिएकाले मृत्यु भएको बताएका थिए । उनको परिवारलाई पनि ‘कहीं लगे पनि सञ्चो नहुने’ जवाफ दिएका थिए । डा. मरासिनीले हामीलाई पनि त्यही कुरा दोहो¥याए ।
औषधि : ‘ब्याच नम्बर छैन’
अस्पतालकै शब्दमा ‘अनपेक्षित मातृ मृत्युदर बढिरहेको’ साढे दुई महीनापछि मात्रै औषधि परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको देखिन्छ । अस्पताल प्रशासनले त्यसबीचमा आफूले गरेका प्रयत्नहरूबारे केही बताउन सकेको छैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनी भन्छन्, “यस विषयमा के गरियो त्यो भन्न जरूरी छैन ।”
“मर्नेका आफन्तलाई नौ÷दश हजार रुपैयाँसम्मको जागिर लगाइदिन्छौं भनेका थिए, तर मान्छे नै गएपछि जागिरले के गर्नु भनेर छोडिदियौं” तिलकुमारीले भनिन् ।
← सुटुक्क छाडिन्छन् बलात्कारका अारोपी
अोलीलार्इ रिझाउन मोदी नेपाल अाउने ! →